Sunday September 06, 2020 - 23:56:24 in Wararka by Mogadishu Times
Mudane Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre ummaad Waliba waxay leedahay Shaqsiyaad astaan u ah waxaana tahay Haldoorki aan la hilmaami doonin, ogsoonow waxaa qayb ka tahay Quluubta Shacabka Soomaaliyeed.
Inkastoo inooga tagtay Dhaxal Raadadkiisu wanaagsanyahay islamarkaasne gogol xaar u aheyd hoggaamintadi tayada laheyd, iyadoo taasi nagu hagi doonto in aad sii dagaantid quluubtiina, waxaa jira himilooyin ku dheehan rajo oo aan la hilmaami karin dhamaan rajooyinkii aad abuurtay waxay saldhig u ahaayihiin astaan Dowladdnimo ee ku dayasho mudan, annago og In ka badan rubuc Qarni inay markale cagahooda isku taagi karaan Dadka iyo Dowladdnimada Soomaaliyeed.
Hadaba, Waxaa tahay Halka Shaqsi ee naga samatabixi kara Xaaladaha adag ee dadka Soomaaliyeed ay dareen sanyihiin waxaan la soconaa sida saameynta leh ee aad wax uga qabatay dhisida Maamul loo dhan yahay Dowaldd Gobaleedka Galmudug taasi waxaa lagu qeexi Karaa in aad tahay Hogaamiye hufan islamarkasne dhaxal reeb u ah bulshada Soomaaliyeed.
Mudane Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre "Gadaashaa lama helin deganaan iyo Xasilooni Siyaasadeed Waxaan sugnaa waa Adigoo ah Madaxweynaha Soomaaliya 2021 hadii alle Idmo.”
Salaad Cali Jeelle :Waa Aragtideyda kaliya